अनुदानमा आएको अक्सिजनमा वनमन्त्री आलेको फोटो टासियो।। भन्छन 'व्यक्तिगत लगानिमा ल्याएको'।।वास्तविकता हेर्नुहोस । - News20 Media
अनुदानमा आएको अक्सिजनमा वनमन्त्री आलेको फोटो टासियो।। भन्छन ‘व्यक्तिगत लगानिमा ल्याएको’।।वास्तविकता हेर्नुहोस ।
May 24, 2021 May 24, 2021 N20LeaveaComment on अनुदानमा आएको अक्सिजनमा वनमन्त्री आलेको फोटो टासियो।। भन्छन ‘व्यक्तिगत लगानिमा ल्याएको’।।वास्तविकता हेर्नुहोस ।
कोरोनाबाट ज्यान गुमाएर पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कारको लागि ल्याईएका शव जलाउन दाउराको कमि नहोस भन्दै निर्देशन दिएका बन मन्त्री प्रेम आले फेरि विवादमा तानिएका छन ।
वन तथा वातावरण मन्त्री आलेले व्यक्तिगत खर्चमा आफ्नो गृहजिल्ला डोटिका कोरोना अस्पतालमा मेडिकल सामग्री पुराएका छन । यद्दपी अक्सिजन सिलिन्डरमा उनको तस्वीर टासेर वितरण गरेको तर उक्त सिलिन्डर चिनले अनुदानमा दिएको बुझिएको छ ।
उनले वितरण गरेको स्वास्थ सामग्री ७५ थान भरिएको अक्सिजन सिलिन्डर, सर्जिकल मास्क १ लाख ५० हजार थान, ३० थान वेड, स्यानिटाईजर लगाएत रहेको बताइएको छ । हाल वन तथा वातावरण मन्त्री समेत रहेका आले डोटि जिल्लाबाट बिजयी पुर्व साम्सद हुन । यो पनि पढ्नुहोस………
नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले सात वटै प्रदेशका सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरुको वरिपरि सातवटा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने भएको छ । कोरोना महामारीमा अक्सिजन नपाएर स्वास्थ्य जोखिममा परेका नागरिकका लागि सहज रुपमा अक्सिजन उपलब्ध गराउन त्यस्ता प्लान्ट स्थापना गर्न लागिएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस………
स्थायी समितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि पार्टीको तर्फबाट सबै खालका पहल तथा प्रयास गरिने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
ओलीको सुटआउट जारी: थप १२ जना एमाले सांसदलाई स्पष्टीकरण, निष्कासन गर्ने तयारी को को परे ?
सैन्य ‘कू’ : ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ८ सय १८ पुग्यो, यस्तो छ घट्ना
शनिदेवको दर्शन गर्दै आज आसार ०६ गते । शनिबारको राशिफल हेर्नुस ! २४ घण्टा भित्र खुसिको खबर सुन्न पाउनु हुनेछ
June 20, 2020 N20